गर्भावस्था को समयमा, नारी शरीर अथाह परिवर्तनहरू undergoes। यो fairer सेक्स प्रत्येक प्रतिनिधि, तिनीहरूले विभिन्न तरिकामा उत्पन्न गर्न सक्ने टिप्पण लायक छ। साथै पछि गर्भावस्था रूपमा अघिल्लो व्यक्तिहरूलाई देखि धेरै फरक हुन सक्छ।
एक बच्चा महिला लागि प्रतीक्षा अवधि फरक निदान र अज्ञात सर्तहरू सामना। त्यसैले, केही, एक रोचक स्थिति भएका भ्रूण को टाउको कम छ भन्दै आइमाइहरु को। यो सुविधा यस लेखमा छलफल गरिनेछ बारेमा थियो।
भ्रूण को टाउको कम छ, यो कस्तो अर्थ राख्छ?
एक expectant आमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ यस्तो कथन सुन्न सक्छ, त्यो अक्सर आत्तिन्छन्। यो categorically असम्भव गर्छन्। भ्रूण टाउको को कम स्थिति एक विकृति छैन। यस्तो अवस्थामा आफ्नो नजन्मेको बच्चा हानि गर्दैन। तथापि, यस्तो सुविधा को खोज मा केही सिफारिसहरू पालन गर्नुपर्छ।
यसलाई स्वतन्त्र भ्रूण को टाउको को कम स्थिति निर्धारण गर्न सम्भव छ? नकारात्मक यो प्रश्नको जवाफ। डाक्टर एक महिला यो सुविधा उपस्थिति बारेमा शक हुन सक्छ भन्छन्। तर निर्धक्क भन्न भ्रूण को टाउको कम छ कि, यो सम्भव मात्र परीक्षण पछि हो। त्यहाँ यस्तो स्थिति निर्धारण दुई तरिकाहरू छन्।
तालिका समयमा pelvic परीक्षा डाक्टर बच्चा को स्थिति निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। जब शीर्ष अनुभवी obstetrician को ग्रीवा नहर प्रवेश देखि बच्चाको कति टाढा शरीर निर्धारण गर्छ।
यो सर्वेक्षण मा पनि भ्रूण टाउको कम छ कि निर्धारण गर्न सक्छ। यस मामला मा डाक्टर, को cervix को राज्य परिभाषित र अमेरिकी रिपोर्ट यसको स्थिति वर्णन गर्न निश्चित हुनुपर्छ।
के भने बच्चाहरु टाउको कम छ?
यस विशेष गर्भवती महिला को खोज मा अक्सर कुनै पनि उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् छैन, तर डाक्टर सधैं सल्लाह र सुझाव दिने छ। गर्भावस्था को चरण आधारमा अलग-अलग हुन सक्छ। हामी एक कम बच्चाको स्थानमा व्यवहार कसरी बुझ्न?
शारीरिक गतिविधि को प्रतिबन्ध
को मा भ्रूण को पहिले मेटाउने श्रोणि महिलाहरु हामी सधैं कुनै पनि तनाव सीमित गर्न सिफारिस गरिएको हो। यसलाई कुनै पनि खेल प्रशिक्षण त्याग्न र शान्त जीवन नेतृत्व गर्न आवश्यक छ। यसलाई कडाई एडी मा भारी वस्तुहरु वा पैदल उचाल्न निषेध गरिएको छ।
सेक्स को इन्कार
यो मा Expectant आमा अत्यधिक सेक्स इन्कार गर्न सिफारिस गरिएको। यस्तो कार्यहरू समयमा निकै को गर्भाशय कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो cervix को पहिले खोल्ने योगदान पुग्छ।
कम-झूट टाउको नजन्मेको बच्चाको पहिले नै ग्रीवा विस्तार प्रोभोकिंग, को लैंगिक अंग गर्न प्रवेश मा प्रेस।
जब बच्चा टाउको को स्थान कम छ महिलाहरु sedatives लिन सल्लाह छन्। यी समावेश दबाइ "Valerian" र अर्थ "Motherwort"। यी औषधिहरू पनि नजन्मेको बच्चाको लागि धेरै सुरक्षित छन्।
यी औषधिहरू मात्र विशेषज्ञहरु को सिफारिसहरू लिएको हुनुपर्छ। कहिल्यै आत्म-medicate। अन्यथा, तपाईं मात्र स्थिति worsen गर्न सक्नुहुन्छ।
यस ब्यान्ड को प्रयोग
कम मा बच्चाको स्थान सधैं एक पट्टी प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो उपकरण कुनै पनि स्टोर वा फार्मेसी नेटवर्क चिकित्सा आपूर्ति खरिद गर्न सकिन्छ। बिस्तारै बच्चालाई ठूलो पेट समर्थन र दिन हुनेछ पट्टी prematurely जन्म हुन।
यो पट्टी प्रयोग मात्र गर्भावस्था को दोस्रो आधा गर्न सक्ने टिप्पण लायक छ। उपकरण सधैं तेर्सो स्थिति हुनुपर्छ लगाउने। यस मामला मा, दक्षता अधिकतम हुनेछ।
टाउको को पहिले मेटाउने को उपचार
सुधार मात्र मामला मा बाहिर छ, जब पहिले खुलासा वा ग्रीवा छोटा। किन यो निदान संग महिलाहरु सधैं एक चिकित्सक को पर्यवेक्षण अन्तर्गत हुनुपर्छ यो छ।
उपचार cervix एक "pessary" भनिन्छ उपकरण लगाउने भन्ने तथ्यलाई मा हुन्छन्। उहाँले पकड हुनेछ ग्रीवा कुलो माथि जन्म गर्न सुरु स्थिति। यो एक बच्चाको पहिले जन्म रोक्न मद्दत गर्नेछ।
साधारणतया भ्रूण टाउको 36 वा पछि श्रोणि मा उतरती गर्भावस्था को 38 सप्ताह। यस मामला मा, महिला कुनै पनि सल्लाह दिन र सामान्य जीवन नेतृत्व गर्न अनुमति थिएन। यो जन्म लागि तयार यो घटना को अन्त्यमा बच्चा donoshen कि टिप्पण लायक र छ।
बच्चालाई टाउको को स्थान कम छ तपाईं पाएका छन् भने, ध्यान विशेषज्ञ सबै सिफारिसहरू सम्झनुपर्छ। विषय नियमहरूमा गर्न समय र उनको बच्चा जन्म दिन सक्छ।
ग्रीवा क्यान्सर: कारण, लक्षण, उपचार। ग्रीवा क्यान्सर: जीवन
किन महिला योनी मांसपेशीमा खेती चाहिन्छ
कारण - ovulation समयमा रगत। रगतले ovulation समयमा निर्धारण
गर्भावस्था चिलाउनु र गुच्छे समयमा Nipples: कारणहरू
घनिष्ठ ठाउँ कसरी दाढी गर्न
कसरी मानिसहरू मा एचपीवी गर्छ?
सारांश संरचना र दृष्टिकोण
वोक्सवैगन: 1 मंच4लाख मोटर मा
डिशवाशर, सुझावहरू र सल्लाह जोड्दै।
Monoblocks: कसरी चयन गर्ने? Monoblocks: मूल्य। सर्वश्रेष्ठ कैंडी पल्ट